Manchester City oo FA-Cup-ka ka reebtay kooxda Man. United | raascasayrmedia.com
← DKMG oo hub ay lahaayeen Shabaab loo soo gacan galiyay
Kulan dhexmaray Jaaliyadda Soomaalida Belgium iyo Danjire Nuur Cadde →
April 17, 2011 · 12:52 am
Manchester City oo FA-Cup-ka ka reebtay kooxda Man. United
Yaya Touré ayaa si fudud kooxdiisa Manchester City u diray Finalka koobka FA Cup,kadib markii uu u saxiixay kooxdiisa City goolkii ay uga badiyeen Man United daqiiqadii 52-aad,markii uu si khibrad ah uu kubadda uga qaatay cayaartoyda qadka dhexe ee Man. United.
Kooxda Manchester City ayaa loo saadaakinayaa in ay ku guuleysato koobkan FA Cup-ka,iyadoo Finalka ay isku arki doonaan kooxaha Bolton iyo Stock City kii soobaxa labadaasi koox oo maalinka axadda 17-ka April wada ciyaari doona.
Ciyaaryahanka duqoobay ee kooxda Man United uga ciyaara qadka dhexe ee Paul Scholes ayaa calaamadda cas loo taagay daqiiqadii 72-aad markii uu si toos ah u laaday cayaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda Man City Pablo Zabaleta.
Dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa 3-1 ugu awood sheegatay kooxda West Bromwich oo ay marti u ahayd,ciyaar ka tirsanayd koobka Premeir League-ga.
Kooxda Chelsea goolasha waxaa u kala saxiixay Drogba, Kalou iyo Frank Lampard,halka kooxda West Bromwich goolka qura ay keensatay uu u dhaliyey laacibka reer Nigeria ee Peter Odemwingie.
Aston Villa ayaa iyana 2-1 uga adkaatay kooxda ay martida u ahayd ee West Ham United,waxaana Aston villa labada gool u saxiixay D. Bent iyo G. Agbonlahor,halka kooxda West Ham goolka daciifka uu u dhaliyey weeraryahanka ay amaahda uga soo wadatay kooxda Tottenham ee Robbie Keane.
Everton waxay 2-0 ku garbaashtay kooxda Blackburn Rovers,Wigan Athletic-na waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Blackbool, Birmingham City ayaa iyana 2-0 ku tuntay kooxda guul darradda ka bixi la’ ee Sunderland.